El Camino: Sarimihetsika tsy manam-paharoa mamorom-bary mifangaro amin'ny Lectrosonics - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Ilay tantara mahatsikaiky vaovao, School Fight, dia mampiasa ny fanaraha-maso / recorder Shogun 7 HDR mba hanomezana endrika Fahafo vaovao ny Sony FS7.
Ny Mitch Paulson an'i EFILM dia manohana any ivelan'ny ala any amin'ny "Jumanji: ny ambaratonga manaraka"
BroadwayHD dia nandefa serivisy horonantsary streaming streaming Generation manaraka miaraka amin'ny 24i
Cooke Optics dia manokatra ny serivisy serivisy LA ho an'ny fanohanana ny mpanjifa amin'ny tsena lehibe
RUSHWORKS dia mampiditra RUSHPROMPTER: rindrambaiko teleprompting "matanjaka"
TSL Products 'Miaro ny tontolo iainana famokarana ara-panatanjahantena TSL Products'
Goldcrest Post dia mamelona ny feon'i New York ao amin'ny Sixties amin'ny Epic Limeo Epicime Crime Series "Rain'i Harlem"
Broadcasting Q&A lavitra amin'ny fanatanjahantena miaraka amin'ny injeniera Audio Chad Robertson
Ny fifandraisana amin'ny mpanjaka any Taiwan dia mifatotra amin'ny fomba fanao amin'ny fampielezankevitra kardiology amin'ny fampiofanana sy fandrosoana ara-pitsaboana
ATEME TITAN UHD Powers TV CULTURA voalohany amin'ny Live 4K-UHD Broadcast
NUGEN Audio natolotry ny haino aman-jery shinoa
Home » News » El Camino: Sarimihetsika ratsy mamontsina amin'ny fahandroana mifangaro Crystal-Clear miaraka amin'ny Lectrosonics
El Camino: Sarimihetsika ratsy mamontsina amin'ny fahandroana mifangaro Crystal-Clear miaraka amin'ny Lectrosonics
Albuquerque, NM (Novambra 5, 2019) - El Camino: Ilay horonantsary Breaking Bad Breziliana voalohany nanerana an'izao tontolo izao tao amin'ny Netflix fa finaritra amin'ireo mpankafy ilay andiany izay niorina. Ny famokarana feo mpamokatra feo Phillip Palmer dia niantehitra fotsiny Lectrosonics Digital Hybrid Wireless® mba handraisana an-tsoratra ny fifanakalozan-dresaka rehetra sy feo maro tsy mahazatra sy ambient izay matetika ampiana aorian'ny famokarana. Ny labany dia ahitana rafi-panomezana maoderina Venue 2 telo, mpivezivezy SMV valo ho an'ny mika vatana, mpandefasana HMA efatra ho an'ny boom sy mics zavamaniry, UH roa efa zokinjokina izay nampiasaina ho "feon'Andriamanitra," napetraka ary mpivady roa nifindran'ny LT ho an'ny serasera fifandraisan-davitra.
"Zava-dehibe ny fananganana Wideband satria ny habetsaky ny habakabaka izay tsy maintsy hiasantsika izao," hoy i Palmer, "ka ny Lectrosonics Venue 2 no safidy mazava. Tranon-tsoavaly rackmount izy io izay mety hahatratra amina modely enina mpandray, ka azonao atao ny mifangaro sy mampifanaraka ny fantsom-peo miorina amin'ny fandefasana sy ireo sakana izay ampiasainao. ”
Io fahaiza-miaina widebande - sy ny fahalalahan'ny lectrosonics fanta-daza rehefa misy mpivady mpitaovana mpandefa sy famindrana miverina haingana, dia haharesy matetika izany andro izany. “Olona zatra manao sary mihetsika ao New York na Los Angeles lazao amiko hoe: 'Tsara ny mivoaka any andrefana izay misy fiaramanidina maimaimpoana,' "hoy izy nanazava. “Raha ny marina, be RF be dia be ao akaikin'i Albuquerque. Betsaka ny miaramila sy indostria ary loharanom-baovao mandroso toa ny resaka walkie. Izay misokatra malalaka amin'ny maraina dia mety misy fanelingelenana amin'ny tolakandro. Ny fihenam-bidy matetika izay omen'ny Lectrosonics dia namonjy ny Bacon matetika tao! ”
Lectrosonics 'elanelana lava amin'ny fantsom-pamoahana famindrana, ary ny kalitaony, izay tena mampiaiky an'i Palmer. “Izany no hena sy ovy avy amin'ny marika, araka ny hevitro. Madio loatra ary azo ianteherana. Tsara ny habe ary rehetra, fa raha tsy tsara ny marika dia tsy maninona izany. Efa ao amin'ny maody 100-milliwatt aho amin'ny ankamaroan'ny fotoana, ary indraindray, toy ny fiara-fiara-ny fiara dia handeha hiakatra ampahefatra isan-karazany isika. Ny fitazonana ny fiambenana ataonao ambany dia ahafahanao mivezivezy amin'ny fantsom-pifandraisana maro be arak'izay vitanao ao anatin'ilay spraika be dia be. Izay no teo amin'ny Lectrosonics no tompon-daka. ”
Ity fahazarana ity dia avelao ny ekipa handrakitra ny ankamaroan'ny fifanakalozan-dresaka amin'ny fotoana tena izy, izay tsara indrindra amin'ny fahazoana ireo fampisehoana tsara indrindra amin'ny mpisehatra. "Nahafahanay tanteraka ny filana ADR noho ny Lectrosonics. Mametraka fonosam-batana ho an'ny tsirairay aho raha tsy hoe ny toetra amam-bonika kely dia manala azy io. Ny fananana mikrô amin'ny mpisehatra rehetra mandritra ny fotoana rehetra dia mihena foana ny fotoana handevenana ny lahatenin'ny olona iray any amin'ny tontolo iainana. Manome lalana misaraka ihany koa izahay ho an'ny famoahan-dahatsoratra mba hiara-miasa raha toa ka mifampiresaka ny mpisehatra rehefa miresaka. ”
Raha ny tena izy, ity famoronana ity dia mihatra amin'ny feo tsy misy fifanakalozan-dresaka koa - ilay karazana ampidirina amin'ny ankamaroan'ny famokarana amin'ny alàlan'ny famolavolana feo amin'ny solosaina sy Foley. Tao anatin'ny seho feno fahirano izay nivadihan'i Jese tao amin'ny efitranon'i Todd taloha, mba hahitana kitapom-bola izay fantany fa nafenina tao, hoy i Palmer namaritana ny fomba "namiravira tanteraka an'i Aaron Paul. Avy eo mifamadika amin'ilay fomba fijery ambonin'ny drafitra gorodona izany, izay ahitanao an'i Jesses marobe manangona efitrano maromaro indray mandeha. Ny fanehoana an-tsehatra ny fikatsahana goavambe amin'ity fomba ity dia hevitra mahavariana izay nahatonga an'i [mpanoratra sy talen'ny] Vince Gilligan hanamarina ny famokarana mpamokatra Judy Rhee. Tena nisy tokoa io andiany io - nanamboarana azy toy izany izy ireo, miaraka amina fakantsary malalaka manidina 60 tongotra eny amin'ny rivotra. Raha dinihina, tsy afaka ny nitifitra azy izahay, noho izany dia nanana microfon-tariby tsy misy fambolena aho na aiza na aiza. Mametraha zavatra somary nohatsaraina ny zavatra sasany, fa ny ankamaroan'ny zavatra henonao dia voarakitra. Tian'i Vince ny tena feo ary i Lectrosonics no alaintsika rehetra. ”
"Toy izany koa no nataonay tamin'ny fiara, toy ny Chevy El Camino tamin'ny titre," hoy hatrany Palmer. "Afaka nahazo ny feon'ny fiara tena izy izahay fa tsy tokony hiverina ary hanamboatra azy ireo."
Sahala amin'ilay andiany tany am-boalohany, El Camino dia manasongadina toerana maromaro ao amin'ny tontolo masiaka. Nanontany ny fanamafisan'ny fitaovana ny fitaovany i Palmer, "hoy aho tamin'ny alàlan'ny famoriam-bola. Ny fitaovan'i Lectro dia nihazona tsara tokoa nandritra ny taona maro izay fa rehefa misotro fehin-kibo aho dia amin'ny fivarotana azy fa tsy ametrahana azy amin'ny boninkazo. Ny singa iray hafa dia ny serivisy. Amin'ny tranga tsy fahita firy dia misy zavatra mipoaka, tsy afaka mieritreritra ny fotoana iray tsy nahavita nanamboatra azy ireo aho. Nentiko tany amin'ny toerana aho, naloto maloto, nahamaina azy, nokapohiko, ary ny Lectrosonics dia nahavita nanatontosa azy ireo ho toy ny vaovao — matetika haingana kokoa noho izay nokasaiko hatrizay. Tsy afaka misafidy mpanamboatra hafa ho an'ny kojakoja tsy misy finday aho. ”
El Camino: Nisy horonantsary Breaking Bad nahazo fahazoana famandrihana voafetra ary mandeha ao amin'ny Netflix izy izao.
Najaina tsara tao anatin'ireo horonantsary, horonantsary, ary ny teolojia ara-teknolojia teôria hatramin'ny 1971, Lectrosonics rafitra microfone Wireless sy ny vokatra an-tserasera dia ampiasaina isan'andro ao amin'ny fampiharana amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny injeniera audio izay mahazatra ny fanoloran'ny orinasa ny mpanjifa, ny serivisy mpanjifa, ary ny fanavaozana. Ny Lectrosonics dia nahazo loka Akademia sy Teknika ho an'ny teknolojia Digital Hybrid Wireless® ary mpanamboatra US monina any Rio Rancho, New Mexico. Tsidiho ny orinasa aty amin'ny aterineto www.lectrosonics.com.
Lahatsoratra farany tamin'ny msmediainc (jereo rehetra)
El Camino: Sarimihetsika ratsy mamontsina amin'ny fahandroana mifangaro Crystal-Clear miaraka amin'ny Lectrosonics - Novambra 5, 2019
Ny CCTV dia mandeha ao amin'ny hazakazaka amin'ny sambo Dragon miaraka amin'ny Lectrosonics nomerika Hybrid Wireless - Oktobra 9, 2019
Ny rafitry ny lectrosonics Venue2 dia hita ao amin'ny 941-960 MHz Band ankehitriny - Oktobra 1, 2019
fampitana injeniera fampitana Engineering Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Lectrosonics lectrosonics digital technology hybrid Wireless lectrosonics HMA transmitter Lectrosonics SMV transmitter Lectrosonics Venue2 mpandray Spears & Arrows Video injeniera	2019-11-05
Previous: DPA's 6066 Subminiature Headset Mic nomontsina ho an'ny Prestigious TEC Award
Next: Fahaiza-miaina amin'ny sary studio
Injeniera amin'ny fampiantsoana an-tserasera